Lighweight Wiricheya | Karman® Ergo Chiedza Wiricheya kana LT-980 13lbs *
musha / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya isingaremi
Achiratidza zvose 21 zvawanikwa
Chero Chigaro Saizi16 "Chigaro17 "Chigaro18 "Chigaro19 "Chigaro20 "Chigaro
Chero Armrest RudziwakasimbaFlip KudzokaInobviswa
Zvizhinji paWireweight Wiricheya:
The Chisingaremi Chinyorwa Wiricheya kusimudzira kukuru pamusoro pewiricheya inorema iyo inogona kukonzera kuti mamiriro ako awedzere uye inogona zvakare kutungamira kune mamwe matambudziko epanyama.
Zvakare, Mumakore gumi apfuura, mawiricheya asingaremi uye akapetwa zvave zvakajairika muindasitiri, mabhenefiti ayo anopiwa neyakareruka furemu pamwe neyakareruka michina inogona kubatsira vashandisi kuita mabasa ezuva nezuva pasina kurema kwewiricheya kuve dambudziko rezuva nezuva. .
Ndezvipi zvimwe zvakanaka zvaunogona kuva nazvo nemawheelchaire asingaremi?
Mawiricheya asingaremi ane zvimwe zvakawanda zvakanakira mushandisi, imwe yemabhenefiti akakura ehuremu hwemawiricheya emawoko ndeyekuti iwo anowanzo kuve nyore kupeta uye anowanzo kutakurika kupfuura echinyakare mawiricheya.
Zvakare, iwe unogona zvakare kutora mukana wekuti zviremu zvisina kuremerwa zviri nyore kwazvo kushandiswa seyaunozvifambisa pachako zvigaro, zvichireva kuti iwe unogona kunakirwa rusununguko runouya pamwe nekuve nechiremera cheya cheya cheya. Yedu isingaremi akateedzana ari muzvigaro upamhi kubva pamasendimita gumi nenzira yose kusvika pamasendimita makumi matatu, uye huremu hunorema hunokwana mazana mashanu nemakumi mashanu emamirioni.
Uyezve, unogona kutenga zvigaro zvakapetwa zvakapetwa kubva kune inotungamira inogadzira wiricheya munyika. Isu tinopa akanakisa zvigaro zvigaro zviri nyore kupeta nekuchengetedza. Mwenje wiricheya anowanzo gadzirwa kubva kualuminium asi dzimwe nguva kubva kusimbi kana musanganiswa wesimbi dzese, izvo zvinopa yavo yakaderera pane yakajairwa kirasi uremu.
Wiricheya isingaremi muchikamu ichi kazhinji zvinorema kubva pamakumi maviri nepfumbamwe kusvika makumi matatu nepondo imwe neimwe. Tine mawiricheya akawanda ekusarudza kubva mune ino nhanho uye zvakaderera pazasi makumi maviri nemakumi mana emakirabhu zvakare muchikamu chisina kureruka. Kana iri huremu hwauri kutsvaga, bvunza nezve yedu nyowani 29 lb furemu ERGO KUTiza.
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru, mhando, misiyano ye lightweight folding wiricheya kusarudza kubva. Tine sarudzo hombe yemawiricheya emawoko, anosanganisira asingaremi kutakura, mawiricheya akajairwa, asingaremi, Ultra asingaremi, ergonomic, nezvimwe.
Zvakare, kusarudza chikamu, modhi, ruvara kana kunyangwe mutengo poindi kwakakosha kune wekupedzisira mushandisi kunyatsonzwisisa "mamiriro eunyanzvi" zvigadzirwa zvekufamba. Takazvipira kukutsvagira chigaro chakakwana chekushandisa kwehupenyu hwako mukunyaradza, kufamba, uye makwikwi sarudzo. Isu kuKarman tiri pano uye takazvipira kune zvamunoda zvese.
Macheya ese anouya neanobata anobata akajairwa. Mazhinji anowanikwa se16 ″ kana 18 ″ chigaro upamhi. Zviri nyore kufamba pamusoro pewiricheya ramp. Mazhinji macheya ane dhesiki-kureba armrest mapedhi. Mimwe mienzaniso yemawiricheya ine flip-back armrests uye inoita kuti kutakura kuve nyore kunyanya mudhiragi remota kana chero imwe nzvimbo yekuchengetera.
Swing-away detachable gumbo-zororo zvakare inopa dzimwe nzira dzekufamba uye nyore kushandisa. Bvunza nezve edu anoshanduka kana mushonga unobva kuBariatric kana iyo KM-8520F20 uye KM-8520F22 isingakwanise chero chaicho chaunoda iwe kana kutarisa chedu BT-10 muenzaniso.
Nei Uchisarudza Wiricheya Yakareruka?
Kusarudza chigaro chakareruka kunonyanya kusarudzwa kana mushandisi anenge achizoshanda sachigaro achiyera zvido zvavo, kusanganisira zviitiko zvehupenyu, huwandu hwenguva nguva zuva nezuva iyo sachigaro ichazoshandiswa, uye mamiriro uye maitiro ehurongwa hwavo.
Mamiriro akasiyana anogona kutaurira mhando yewiricheya yauchazoda, zvinoenderana nezvinodiwa uye nhanho yekufamba. Vashandisi venguva yakazara wiricheya vangangoda imwe mhando yemidziyo pane vashandisi venguva, zvichienderana nemabasa ezuva nezuva uye sarudzo yemararamiro.
Iwe unogona kuziva zvakawanda nezve edu anotakurika asingaremi macheya kubva kune edu zvigadzirwa zvinyorwa, kusanganisira iyi flyer:
Yekutakura mawiricheya ndiyo sarudzo chaiyo yekutakura mumwe munhu kuenda uye kubva kunzvimbo dzaungade kufamba nadzo. A chokufambisa wiricheya inowanzo derera uye kupenya kupfuura a wheelchair yakajairwa, Ichiita sarudzo yakanaka yezvipingamupinyi zvakaomarara uye nzira dzakamanikana. Pane misiyano pakati peyedu yekupedzisira tarisiro = "_ isina chinhu" rel = "noopener noreferrer"> Crash Kwayedzwa S-ERGO dzakateedzana kutakura mawiricheya uye zvakare hupfumi zvigadzirwa zvigadzirwa. Dzimwe sarudzo hombe dzinosanganisira yedu ERGO LITE uye S-115TP. Tine zvakare wiricheya yakagadzirirwa kufamba, TV-10B.